Yini ebangela ukujuluka ebusuku futhi kufanele ngikhathazeke nini? - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Cindezela Imfundo Yezempilo, Izindaba Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ukukhathazeka nini ngokujuluka ebusuku
Ukukhathazeka nini ngokujuluka ebusuku
Ulindele ukujuluka lapho uzivocavoca noma uchitha isikhathi ngaphandle ngosuku olushisayo lwasehlobo. Kepha, ukuvuka ekuseni ngama-pajama amashidi namashidi kungakhathaza. Yize ukujuluka ebusuku kukhathaza, ochwepheshe bathi nawo ajwayelekile. Ku- isifundo esisodwa , 41% wabahlanganyeli babike ukujuluka ebusuku.
Yini ebangela ukujuluka ngenkathi ulele? Izithukuthuku zasebusuku zingabangelwa yizinhlobonhlobo zezimo zezokwelapha, kufaka phakathi izifo, imishanguzo, ama-hormone, ingcindezi nokukhathazeka, kusho uCassie Majestic, MD, udokotela wezokwelapha eziphuthumayo e-Orange, eCalifornia, umsunguli we kungokubi.com .
Kuyini ukujuluka ebusuku?
Ukujuluka kwangempela ebusuku kungaphezu kokuvuka kushisa lapho ushiya ngengozi i-thermostat ekhuphuke kakhulu. Obeye aziwe njengo ukulala i-hyperhidrosis , ukujuluka ebusuku kwenzeka phakathi kwamasonto ambalwa, noma ngabe izinga lokushisa egumbini lakho lokulala lipholile. Akuwona nje umjuluko olula — kunjengokungathi amaphijama akho namashidi kumanziswe umswakama.
I-lorazepam benzo ezinye izidakamizwa ekilasini elifanayo
Yini ebangela ukujuluka ebusuku?
Kwesinye isikhathi ukujuluka ebusuku kungabangelwa ukuthi ikamelo lakho lokulala liyashisa noma unezingubo zokulala eziningi kakhulu embhedeni wakho, kusho uSaralyn Mark, MD, isazi se-endocrinologist, i-geriatrician, kanye nochwepheshe wezempilo yabesifazane futhi owasungula Izixazululo zeSolaMed . Ngezinye izikhathi, kungaba yindlela yomzimba wakho ekutshela ukuthi kukhona okwenzekayo ngempilo yakho. Okusho ukuthi, isimo sezempilo esiyisisekelo noma imishanguzo ethile kungaba yizimbangela zokujuluka ebusuku.
Ezinye izimbangela zokujuluka ebusuku zifaka:
Ukunqamuka kokuya esikhathini
Kuya ku Ama-85% abesifazane ukudlula ukunqamuka kwesikhathi kanye nokunqamuka kokuya esikhathini ukushisa okushisayo — ushintsho olukhulu ngokuzumayo ekushiseni komzimba (ikakhulukazi ukuqhuma kokushisa komzimba) —futhi kuvame ukubika ukuthi izimpawu zabo zimbi kakhulu ebusuku.
Ukushisa okushisayo nokujuluka ebusuku kwenzeka ngenxa yokushintsha kwezinga lama-hormone, kusho uDkt Mark. Uma udokotela wakho ethola ukuthi ukujuluka ebusuku kubangelwa izinguquko ze-hormonal, buza mayelana ukwelashwa kwamahomoni , okuvame ukuqeda izimpawu zokunqamuka kokuya esikhathini — okungukuthi ukukhanya okushisayo okubangela ukujuluka ebusuku.
Ngokusho kukaDkt. Majestic , ukujuluka ebusuku kungumphumela oseceleni wemithi eminingi ejwayelekile efaka:
Ukuphuza ama-steroid, njenge webhilo
Imithi elwa nokuvuvukala engeyona eye-steroidal (NSAIDs), efana acetaminophen , ibuprofen , noma umabhebhana
Ukunciphisa izinhlungu (ngokuvamile izidakamizwa zemithi), njenge-hydrocodone
Imithi yezengqondo (njenge-antipsychotic kanye ne-anti-depressants), kufaka phakathi trazodone futhi bupropion
Imithi yesifo sikashukela, njenge-insulin, uma uba noshukela ophansi wegazi ebusuku
Izidakamizwa ezivimbela i-Hormone ezisetshenziselwa ukwelapha umdlavuza othile, njenge tomoxifen
Buza umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo noma wemithi uma ukhathazeka ngokuthi ukujuluka ebusuku kungaba nomphumela oseceleni wemithi yakho.
Ukucindezeleka nokukhathazeka nakho kungadala ukujuluka ebusuku, kusho uDkt. Majestic. Imvamisa kuzoba nezinye izimpawu njengokushintsha kwemizwelo, inkinga yokulala, ukudabuka ngokweqile noma ukukhathazeka ngokweqile, noma ukukhathala okungapheli, usho njalo.
Uma ukucindezeleka noma ukukhathazeka kuyimbangela yokujuluka kwakho ebusuku, udokotela wakho angancoma ukwelashwa kokukhuluma, i-antidepressant , noma ukwenza izinguquko endleleni yokuphila.
Indlala yegilo eyeqile
Ukujuluka ebusuku nakho kungaba uphawu lokuphazamiseka kwamahomoni, njengenkinga yegilo, ngokusho kukaDkt Mark. Indlala yegilo eyeqile (eyaziwa nangokuthi yi-hyperthyroidism), ingadala ukujuluka ebusuku, ukujuluka okweqile, ukukhathazeka nezinkinga zokulala. Ukuhlolwa kwegazi kwe-TSH okulula kungakhomba ukuthi ngabe isifo se-thyroid singadala izimpawu zakho yini ukuze udokotela wakho akunikeze umuthi wokuqeda izimpawu.
Ngingathenga i-celebrex phezu kwekhawunta
Abanye abantu abane-acid reflux noma isifo esibi kakhulu se-gastroesophageal reflux (GERD) bangabhekana nokushiswa yinhliziyo ebusuku nokujuluka ngokweqile.
Abantu abane-GERD baba nesilungulela okungenani kabili ngesonto amasonto ambalwa, kusho uDkt Mark. Uma une-GERD, futhi ingalawulwa kahle, udokotela wakho angancoma ukuthatha i-H2 blocker efana IPepcid AC noma I-Tagamet HB .
Ukudla okuthile okubabayo okuqukethe i-capsaicin kuvusa izinzwa ezifanayo ezikwenza uzizwe ufudumele, kubangele ukujuluka kuphole. Ukugwema lokhu useduze nesikhathi sokulala kungasiza.
Isigqoko sasebusuku singabonakala njengendlela enhle yokuphumula. Kepha, uma ubukade uvuka ujuluka, kungahle kube nengqondo ukushintshela ku-seltzer. Utshwala buxegisa imithambo yegazi esikhunjeni, okungaholela ekujulukeni.
Noma yikuphi ukutheleleka okubangela umkhuhlane kungaholela ekujulukeni ebusuku-noma ngabe umkhuhlane noma ukutheleleka kwamagciwane njenge-osteomyelitis. Abanye abantu abanofuba kanye ne-HIV nabo bangathola ukujuluka ebusuku.
Ukujuluka ebusuku kungaba wuphawu lomdlavuza othile, njenge-non-Hodgkin's lymphoma noma i-leukemia. AmaLymphomas ngokuvamile akhona ngokujuluka okukhulu ebusuku. Yize kunjalo, uDkt.Mark uthi ezinye izimpawu nazo zikhona njengokulahleka kwesifiso sokudla kanye nokwehla kwesisindo okungaqondakali.
Kufanele ngikhathazeke nini ngokujuluka ebusuku?
Izindaba ezimnandi, ngokusho kukaDkt. Majestic ukuthi ukujuluka ebusuku ngokujwayelekile akulona uphawu lwesimo esibi sezempilo.
Izithukuthuku zasebusuku zigxile kakhulu lapho ziqhubeka amasonto amabili noma ngaphezulu, futhi zihambisana nezinye izimpawu, kusho uDkt. Majestic. Qaphela izimpawu ezifana nokwehla kwesisindo ungahlosile, ukushisa komzimba noma ukugodola, ubuhlungu bomzimba nobuhlungu obuhlangene, noma ama-lymph node akhulisiwe.
Uma ubona ukujuluka ebusuku kuhambisana nanoma iyiphi yalezi zimpawu eziyisixwayiso, uDkt. Majestic uncoma ukuthi ukhulume nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ngokushesha okukhulu ukuze ahlole izimo ezithile.
Ngesikhathi sokuqokwa kwakho, udokotela wakho uzothatha umlando wezempilo oningiliziwe futhi angahle a-oda ukuhlolwa kwegazi futhi anqume imbangela eyisisekelo.
Yiziphi izinguquko zendlela yokuphila ezinganciphisa ukujuluka ebusuku?
Naka amaphethini akho kusihlwa
Ingabe uyadla, uphuza utshwala, noma uzivocavoca kuze kuhlwe? UDkt Majestic uthi ngayinye yalezi zinto ingaba nomthelela ekujulukeni kwakho ebusuku.
Futhi cabanga ngalokho okubukayo kuthelevishini noma okufundayo ngaphambi kokulala, kusho uDkt. Majestic. Ingabe kuyakhathaza noma kuyethusa? Kungaba umqondo omuhle ukushintsha lezo zimilo. Uma ulwa nokudangala noma ukukhathazeka, funa usizo lodokotela. Zama ukususa izimbangela ezingaba khona kusukela emahoreni aqala ukulala.
Zijwayeze ukulala kahle
UDkt.Mark uphawula ukuthi ukulala nomlandeli kungagcina izinga lokushisa ekamelweni lakho likhululekile futhi kunikeze nomsindo omhlophe.
uyini umehluko phakathi kwe-amoxicillin ne-ampicillin
Uma uhlangabezana nokujuluka ebusuku, zama ukugcina igumbi lakho lokulala lipholile, gqoka izingubo ezilula futhi usebenzise izingubo zokulala, usho kanje.
Gcina isisindo esinempilo
Ukuthwala amakhilogremu athe xaxa kungadala ukujuluka ebusuku futhi kube yingcuphe yokuthuthukisa ukuphefumula kokulala okungavimbeleki, lapho umphimbo uncipha khona, uvimbela ukuphefumula kwakho.
Uma uthola ukuthi ujuluke ebusuku futhi uvuke ukhathele, cela udokotela wakho ukuhlolwa kokulala ukuze anqume ukuthi ngabe unenkinga yokulala, njenge-apnea yokulala. Ukwehla kwesisindo kungasiza ekunciphiseni ukujuluka ebusuku kanye nengozi yakho yokuthola ukuphefumula kokulala.
Ngikhuthaza abantu abanezithukuthuku eziphikelelayo ebusuku ukuba babonane nodokotela wabo, kusho uDkt Mark. Gcina umbhalo wezinto ezenzeka empilweni yakho nokuthi yini oyidlayo noma oyiphuzayo ngaphambi kokulala. Udokotela wakho angasebenza nawe ekwelashweni ukukusiza ulale kahle ubusuku bonke.
Imiphumela emibi ye-Concerta nokuthi ungakugwema kanjani
ungaphatha kanjani imvubelo yokutheleleka ngamakhambi ekhaya
ungaya ocansini ngemuva kohlelo b
Can apple cider uviniga usizo nge imvubelo ukutheleleka
kwenzekani uma uphuza amaphilisi amabili okwaliwa emzimbeni emahoreni angama-24
ungaphuza kanjani ukupakisha amaphilisi ama-6